shaqooyinka daryeelka caafimaadka iyo xirfadaha | The Refugee Center Online | Refugee Center Online
Top toban shaqooyin loogu talogalay qaxootiga - caafimaadka
Ogow sida loo helo shaqooyinka caafimaadka.
kaaliyaha Ilkaha - kaaliyeyaasha caafimaadka ilkaha sameeyo waajibaadka maamulka iyo daryeelka bukaanka ee aasaasiga ah ee xafiiska daryeelka ilkaha. Tusaale ahaan, kaaliyaha ilkaha diyaarin bukaan nadiifinta afka ama waxaa dhici karta inuu mas'uul ka ah buuxinta iyo abaabulka diiwaanka bukaanka ee xafiiska. Tababarka meel ka sagaal bilood qaadan kartaa laba sano si ay u dhamaystiraan, ku xiran tahay haddii ay tahay shahaado, diblooma ama digrii.
- Ogow sida in ay noqoto kaaliyaha ka diiwaan gashan ilkaha
Duugista therapist - therapist massage A waa qofka isticmaala taabashada in ay ku cayaaraan muruqyada jidhka ku. Tani waxay yarayn kartaa xiisad, stress, oo xanuun ah oo kuu ogolaanaya bukaanka si ay u nastaan. Waxaad u baahan tahay ruqsad si ay u noqon therapist massage ah. Ugu yaraan inta saacadood Legal loo helo ruqsad therapy massage a kala duwan ee gobolka, iyo ugu yar, kuwaas oo u dhaxayn 330 in 1,000 saacadood.
warbixin farsamo Caafimaadka - A farsamo macluumaadka caafimaadka (Hit) hayaa diiwaanka caafimaadka ammaan, sax ah, iyo ilaa taariikhda. Ku dhawaad ​​xogta oo dhan waxaa lagu hayaa on kombiyuutarada. Inta badan dadka ka shaqeeya farsamada macluumaadka caafimaad ee uu haysto shahaado culuunta associate ah ee tiknoolajiyadda macluumaadka caafimaadka ama beer la xiriira.
- Ogow sida si ay u noqdaan farsamo ah macluumaadka caafimaadka
tiknoolajiyadda Radiologic - farsamoyaqaanno Radiologic qabtaan imtixaanada la isticmaalayo imaging, sida X-rays iyo baaritaano CT. Waxay ka garab dhakhtar shaqeeyaan, laakiinse iyagu ma loo tababaray in la ogaado natiijada imtixaanaadka imaging ay sii adkeeyo. degree An associate si ay u noqdaan farsamo darsaya ah qaadan kartaa ilaa laba sano.
Sida aad kor ku arkay, tababar shaqooyin badan oo daryeel caafimaad oo qaadan kartaa waqti dheer. Inkastoo shaqooyinka caafimaadka faa'iido ah oo inta badan si wanaagsan u-bixinta, xirfadle caafimaad oo inta badan la walaac badan ka qaban, waqtiga, iyo masuuliyada. Waxa muhiim ah in aad ka fikirto waxyaalahan ku saabsan haddii aad doonayso inaad daryeel caafimaad mustaqbalkiisa mudada dheer. Waxa kale oo aad sameyn kartaa in:
Read 6 wax si ay u eegaan ka hor doorashada xirfadda caafimaadka
qaado imtixaanka mustaqbalkiisa caafimaadka ee ardayda iyo dadka waaweyn
First, dooran shaqada aad rabto in aad ku tababarto. Markaasuu, ku xiran shuruudaha, waxaad ka xaadiri kartaa Kulliyadaha bulshada ama dugsiga farsamada, tag jaamacad afar sanno ah, ama waxbarasho online.
Haddii aadan helin aad shahaadada dugsiga sare, waa in uu noqon talaabada ugu horeysa ee aad. Barnaamijka GED free RCO ee kaa caawin doona inaad diyaariso noqotay imtixaanka GED ah
Job Corps waa barnaamij dawladda ah oo bixiya waxbarasho lacag la'aan ah iyo tababar xirfadeed si ay u yar yar iyo haweenka da ' 16 in 24. tababarka Job Corps waxaa ka mid ah shaqooyinka caafimaadka sida: CNA, kaaliyaha caafimaadka ilkaha, daawo-, ku xigeenka maamulka caafimaadka, duwaha qaybta caafimaadka, iyo shati kalkaalisada / xirfadeed.
Sida loo dalbado college
wada saar resume: Sida loo sameeyo resume weyn
Diyaariyo wareysiga: Sida loo diyaariyo wareysiga
Search for barnaamijyada iyo khayraadka ee magaalada aad ku.